Muraayada Muraayada Muraayada si Smart TV | Waxaan ka socdaa mac
Jose Alfocea | | Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac, Tababarada
Waxaad rabtaa muraayadda 'Mac' ee Smart TV? In kasta oo ay run tahay in illaa iyo hadda ay suurtagal ahayd in lagu xiro nidaamka OS X-gaaga Samsung Smart Tv adoo adeegsanaya teknolojiyadda AirPlay aaladda Apple, in sidaa la yeelo waxay ahayd lagama maarmaan in la helo Apple TV.
Codsigan cusub ayay suurtagal ku noqon doontaa muraayadda shaashadda Mac OS X oo waxaad ku daawan kartaa nidaamka adoo adeegsanaya Samsung Smart TV la jaan qaadaya, adigoo sameynaya rakibid fudud iyo isku xirka laba qalab isla shabakad.
AirPlay waxay u oggolaaneysaa dadka isticmaala inay si dhakhso leh u maareeyaan oo u wadaagaan dhammaan muusigga, sawirrada iyo feylasha fiidiyowga si silig la'aan ah inta u dhexeysa aaladaha, u muusiga muusigga Gegida Diyaaradaha, iyo muraayadaha muraayadda illaa iyo hadda loo maro Apple TV.
1 Ka faa'iideyso AirPlay taleefankaaga Smart TV
2 Adeegsiga Apple TV + AirPlay
4 Adeegsiga Google Chromecast
Ka faa'iideyso AirPlay taleefankaaga Smart TV
Soosaaraha AirBeamTV BV wuxuu daahfuray Mirror for Samsung TV, oo hadda laga heli karo App Store, si loo fududeeyo muraayadda Apple TV la'aan. Haddii aad haysato Samsung Smart TV laga bilaabo 2012 ama wixii ka dambeeya iyo Mac OS X 10.10, waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho Mirror for Samsung iswaafajin ugu badnaan ah.
Waxaad si fudud u yeelan doontaa in ay ku xidhmaan labada qalabadiga isla shabakada wifi iyo sisMawduuca ayaa si otomaatig ah u raadin doona Smart TV. Marka ku yaal liiska qalabka ku xiranDhammaan inaad sameyso waa inaad doorataa oo aad bilowdaa habka muraayadda. Horumariyayaashu waxay ka digayaan inay jiri karto a dib udhaca illaa 3 ilbiriqsi iyo, haddii ay tahay waqti dheer, waxay kugula talinayaan in la beddelo saamiga isku-dhafka sawirka.
Muraayad loogu talagalay Samsung TV sidoo kale waxay kuu oggolaaneysaa inaad doorato kormeer bandhig ku xiran Mac iyo dooro isha codka: wuxuu codka ka soo saaraa kumbuyuutarka ama ku hadlayaa telefishinada Smart TV.
AirBeamTV BV wuxuu na siiyaa a download lacag la'aan ah iyo nooca tijaabada degdega ah ee aan isticmaali karno 2 daqiiqo, waqti ku filan si loo hubiyo raaxada iyo waxtarka isticmaalkeeda. Nooca buuxa waa Dukaanka App ka ah .9,99 XNUMX laakiin waa ikhtiyaar aad loogu taliyay muraayadda 'Mac' ee Smart TV ee Samsung.
Muraayad loogu talagalay Samsung TV14,99
Adeegsiga Apple TV + AirPlay
Haddii taleefankaaga casriga ahi aanu toos ula jaanqaadi karin tikniyoolajiyadda Apple ee AirPlay ama, waxaad si fudud u haysataa telefishan aan caadi ahayn oo “smart” ah, oo ah qaaciddo kale oo kuu oggolaanaysa inaad nuqul ka sameysid shaashadda Mac-gaaga telefishanka. isticmaal Apple TV.
Waad isticmaali kartaa Apple TV kasta jiilka labaad, saddexaad ama afraad, iyada oo la adeegsanayo in labada hore lagu helo qiimo aad u wanaagsan suuqa gacan labaad.
Markaad haysatid Apple TV-gaaga, waa inaad iska leedahay ku xir fiilada HDMI telefishankaaga oo hubi inuu ka hooseeyo isla shabakadda WiFkaas oo uu Mac ku xiran yahay.
Marka xigta, dhagsii calaamadda 'AirPlay' oo ku taal baanka menu-ga ee Mac-gaaga, xulo Apple TV-gaaga, isla markiiba, shaashadda kombiyuutarkaaga ayaa si weyn uga muuqan doonta telefishankaaga.
Haddii ay dhacdo inaad daawaneyso fiidiyow ka socda YouTube, A3Player, Mitele, Netflix ama adeeg kasta oo kale, waxay u badan tahay in calaamadda 'AirPlay' ay ka muuqan doonto daaqadda loo maqli karo. Riix, xulo Apple TV-gaaga, iyo fiidiyowga waxaa loo sii deyn doonaa TV-gaaga. Dhanka kale, waad sii wadi kartaa inaad u isticmaasho Mac-gaaga sidii caadiga ahayd.
Waxaan ka soo hadalnay "Mirror for Samsung TV", iyo sidoo kale ikhtiyaarka ah in la isku daro AirPlay iyo Apple TV, laakiin waxaa jira fursado badan, tusaale ahaan, Air Parrot 2.
AirParrot waa aaladda ku habboon kuwa leh kombiyuutar Mac duug ah oo aan taageerin tikniyoolajiyadda AirPlay. Codsigan waxaad ku soo koobi kartaa shaashadda Mac-gaaga TV-gaaga, waxaadna dheereyn kartaa shaashadda Mac-gaaga, waxaad u diri kartaa fiidiyoow si aad ugu aragto shaashadda weyn, iyo xitaa barnaamijyada nuqullada shaqsi ahaan.
Faa'iidada kale ee AirParrot 2 waa taas Waxaad u isticmaali kartaa labadaba TV-ga Apple iyo aaladda Chromecast ama kuwa ku hadla ee ku habboon ee AirPlay inaad dirto muusikadaada. Iyo, marka lagu daro, waxay u gudbisaa illaa tayada 1080p waxaadna isku mar ku xidhi kartaa dhowr qaate.
Hadana haddii aadan hubin inay tani tahay xalka aad u baahan tahay, waad awoodaa soo dejiso nooc tijaabo ah oo toddobo maalmood ah Halkan, ka dibna waxaad go'aansataa inaad iibsato iyo in kale.
Adeegsiga Google Chromecast
Beddelka kale ee aad ku dheereyn karto desktop-ka Mac-gaaga ama aad nuqulan karto shaashadda Mac-gaaga telefishankaaga ama kormeeraha dibedda, waa iyada oo loo marayo aaladda Google Chromecast oo lagu daray barnaamijka 'Air Parrot app' in aan hadda si faahfaahsan u aragnay.
Haddii aad haysato Mac duug ah oo aan haysan taageerada tikniyoolajiyadda AirPlay, Isku darka ayaa ka jaban doona wadarta Apple TV + Air Parrot 2 In kastoo, haa, waad ogtahay inaanay jirin wax si fiican looga fahmay aaladda Apple qalab kale oo Apple ah.
Taasi waxay tidhi, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inaad iibsato qalab Google Chromecast ah oo aad ku xidho TV-gaaga iyo isla shabakadda Wi-Fi ee kombiyuutarkaagu ka hooseeyo. Marka tan la dhammeeyo, waxaad horeyba u ogtahay sida Air Parrot 2 u shaqeeyo: riix astaanta ku taal barta menu-ka ee Mac-gaaga, xulo qalabkaaga Chromecast waxaadna awoodi doontaa inaad sii dheereysato shaashadda Mac-gaaga, nuqul ka sameyso ama dir codsi gaar ah ama kaliya maqalka.
Waxaana ku soo afmeeraynaa Adeegga, codsi mahadsanid oo aad awoodid la wadaag waxyaabaha ku jira aaladaha kale ee ku xiran isla shabakada si haddii aad filim, taxane, sawirro, muusig iyo waxyaabo kale oo badan aad ku haysato Mac-gaaga, waxaad kaga ciyaari kartaa TV-gaaga Smart-ka ah iyadoo aan loo baahnayn fiilooyin. Farqiga weyn ayaa ah in barnaamijkan aadan awoodi doonin inaad nuqul ka sameyso shaashadda Mac-gaaga telefishankaaga, laakiin aad u dirto nuxurka, laakiin haddii tani ay tahay waxa aad raadineysay, markaa wey fiicnaan doontaa maadaama aadan u baahnayn Apple TV, Chromecast ama AirPlay, kaliya barnaamijkan aad kari karto ka soo dejiso degelkeeda rasmiga ah oo u isticmaal tijaabo bilaash ah shan iyo toban maalmood ...
Haddii maalin uun Apple go'aansato inay soo saarto TV-ga u gaarka ah, waxay u badan tahay inaan nuqul ka sameysan karno shaashadda Mac-keena si aad u fudud oo aan ku xirnayn agabka ama barnaamijyada dhinac saddexaad, dhammaantood guji fudud, haa, waad ogtahay in haddii qaar maalinta sheygan la soo saaray, ma noqon doono telefishanno jaban waana inaan lacag badan ku bixino.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Muraayad Mac ah oo loo yaqaan 'Smart TV'
Waa wax xiiso leh, haddii LG ay fiiro gaar ah siiso oo lama filaan na siiso
Ku jawaab Txarli
Ugu dambeyntiina wax ka shaqeynaya Sansumg-kayga !!!! Runtii waa u qalantaa oo sifiican ayey u socotaa, waxaan isticmaalay nooca tijaabada ah waxaana horeyba kuugu sheegayaa inay tahay mid raaxo leh, marka hadii codka laga maqlo TV-ga waa inaad rakibtaa qalab wax lagu rakibo, AirBeamTV, intaas ka dib adiga wuu dhagaysan karaa TV-ga dhib la'aan !! Cajiib ah !!!
Waa inaan ka faalloodaa inay u dhexeyso kumbuyuutarka iyo TV-ga sida soo saaraha horeyba u sheegay, laakiin ma ahan wax aniga i walwal gelinaya, markaa waxaad u dhowdahay inaad waqti ku seexato sariirta, hahahaha.
Waan iibsanayaa hadda. Waad ku mahadsantahay ogeysiiska SOYDEMAC.
PS: Telefishinkeygu waa Sansumg UE46D6100 oo hadaan si sax ah u xasuusto, waa kahor 2012.
Ku jawaab juancagr
@juancagr xagee ka heshay nooca tijaabada? Waxaan jeclaan lahaa inaan isku dayo.
Ku jawaab macoyvergaray
ugu fudud: isticmaal Vuze (DLNA Server)
Ku soo jawaab Marcelo Campusano
waa riwaayad dijo
ka hor inta aan mac aan ku xirin hdmi oo ka yimid onkodka. hadda suurtagal maahan ... ma waxay u sabab noqon kartaa barnaamijyadan cusub ee lacag bixinta ????
Ku jawaab fer rivera
Valvaro Marín Ordóñez dijo
Jawaab Álvaro Marín Ordóñez
Haddii aad u baahan tahay deked HDMI ah 12-inch MacBook ah, halkan waa hal ikhtiyaar oo dheeri ah
Beddelaan faylasha PDF-ga ah waxyaabo firfircoon oo leh Flip PDF for Mac